ဂျပန်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံး နတ်ကွန်း!!! သို့သော် လာရောက်ကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ စည်းကားနေတဲ့အကြောင်းအရင်းက? - JAPO Japanese News
ဂျပန်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံး နတ်ကွန်း!!! သို့သော် လာရောက်ကိုးကွယ်သူတွေနဲ့ စည်းကားနေတဲ့အကြောင်းအရင်းက?
လာ 15 Nov 2021, 15:30 ညနေ
“ ဂျပန်မှာအန္တရာယ်အရှိဆုံးနတ်ကွန်း” လို့ပြောလိုက်ရင်၊ သရဲကားရဲ့ ရုပ်ရှင်ခေါင်းစီးလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ တွေးမိသွားတယ်နော်..
ကိုးကွယ်လိုက်ရင် ကျိန်စာတိုက်ပြီးအသတ်ခံရတာတို့၊ လူသတ်မိစ္ဆာက လာပြီးနေတဲ့နေရာတို့..
သို့သော် လက်တွေ့ရှိနေတဲ့ “ ဂျပန်ရဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးနတ်ကွန်း” ကတော့ ဒီလိုအန္တရာယ်တွေကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ကြောက်ခမန်းလိလိကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာမှာ ရှိတဲ့နတ်ကွန်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ ဟော့ကိုင်းဒိုးမှာရှိတဲ့ (太田山神社-Ōta Jinja) ဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး အတည်ပြုနိုင်တဲ့နတ်ကွန်းအရေအတွက်က ၈၁,၁၅၈ နေရာရှိပြီး၊ အခြားသောအတည်မပြုနိုင်သေးတဲ့နတ်ကွန်းပေါင်းများစွာလည်း ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ ထိုအတည်ပြုထားတဲ့နတ်ကွန်းတွေထဲကမှာ အန္တရာယ်အရှိဆုံးလို့ယူဆရတဲ့ နတ်ကွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီနေရာက 拝殿ဟအိဒန်(အရံနတ်ကွန်း) လို့ခေါ်တဲ့ လာရောက်ကိုးကွယ်သူတို့အတွက် လည်ပတ်ရာနေရာသာဖြစ်ပြီး၊ အဓိကကျတဲ့ 本殿ဟွန်းဒန်-ပင်မကျောင်းဆောင်ကတော့ ဒါမဟုတ်သေးပါဘူး။
အဓိကကျောင်းဆောင်ကိုသွားတဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းက ဒီနေရာပါပဲ..
အရံနတ်ကွန်းကနေ ၅၀၀ မီတာလောက်အဝေးမှာရှိပြီး ကြီးမားတဲ့ Torii တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။
လှေကားထစ်တွေကိုတက်သွားရတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီလှေကားထစ်တွေကပဲ ငရဲပါပဲ..
ငရဲလှေကားထစ်ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက် သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေမှာကတော့ ဒီနေရာပါပဲ…
ကြမ်းတမ်းလှတဲ့တောင်တက်လမ်းကို တက်နေရင်းနဲ့ ဗုဒ္ဓကျောက်ဆင်းတုတော်တွေကို သတိထားလာမိမယ်။
ဒီနေရာကလည်း ပင်မကျောင်းဆောင်မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီးကျောင်းဆောင်သာဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်းအထန်တရားအားထုတ်ကြတဲ့ ရဟန်းတော်များရှိရာ ပင်မကျောင်းဆောင်ကြီးမှာတော့ အမျိုးသမီးများ သွားရောက်ကိုးကွယ်မှုကို တားမြစ်ထားပါတယ်။
အဲ့ဒီအစား အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆောက်လုပ်ထားပေးတာကတော့ ဟောဒီအမျိုးသမီးကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာကိုရောက်ရင်တော့ သင်ဟာလမ်းတစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီလို့ မှတ်နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေချည်းပဲမဟုတ် အမျိုးသားများလည်း ဒီနေရာမှာတင် နောက်ပြန်လှည့်သွားတတ်ကြပါတယ်။
အမျိုးသမီးကျောင်းဆောင်ကိုကျော်လာပြီဆိုရင် ကျောက်ဆောင်က ပိုပြီးမတ်လာပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ဆက်သွားမယ်ဆိုရင် ဒီလိုပုံစံနဲ့တက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
၇ မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ ချောက်ကမ်းပါးကိုတက်သွားဖို့ ဒီသံကွင်းတွေကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တောင် မလွယ်ကူနိုင်လောက်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တာကြောင့် မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင် မတက်ပါနဲ့..
ဒီနေရာကိုကျော်ဖြတ်သွားနိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဂူတစ်ခုကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပြင်အဲ့ဒီဂူထဲမှာတော့ စောစောကပြောတဲ့ ပင်မနတ်ကွန်းဆောင် ရှိပါတယ်။
ခေါင်းလေးကို အနည်းငယ်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ အရမ်းလှတဲ့ရှုခင်းဟာ သင်ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုများရဲ့အဖြေဖြစ်ကြောင်းကို သိလိုက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ? ဂျပန်မှာနံပါတ်တစ် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးနတ်ကွန်း..
၎င်းရဲ့ အခက်အခဲကတော့ သူမတူအောင်ထူးဆန်းပေမဲ့၊ ဂျပန်တီဗွီအစီအစဉ်ရဲ့ Idol အဖွဲ့ Nogizaka46 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေက ပင်မနတ်ကွန်းဆောင်အထိတက်သွားတဲ့ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ နာမည်ကြီးသွားပြီး လူများစွာလာရောက် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။
အသွားလည်းခက်သလို အပြန်လည်းခက်ခဲတဲ့ ဟောဒီနတ်ကွန်း…
ကျွန်တော်ကတော့ လုံးဝ….. သွားနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
သို့သော် ကိုယ့်ကိုကိုယ်လုံးဝကြံ့ခိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ပြီး ရောက်အောင်သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်စိန်ခေါ်ကြည့်ဖို့အတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်…
ဂျပန်ဆိုတာ wheelchair သမားတွေအပေါ်ပျူငှာတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလား?
ဘုရားကျောင်းရဲ့ ပြဿဒ်ဆောင်ဟာ ဘာအတွက်လဲ? အနောက်ပိုင်းယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ကြီးမားစွာကွဲပြားနေတဲ့၎င်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ
ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ဟာ တန်ဖိုးထားခံရခြင်းမှ၊ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာအခြေအနေသို့
Hakone တောင်တက်ရထားလမ်း၊ ပြန်လည်ဖွင့်လစ်တော့မည် !!!!!
ဂျပန်ရှိလူကုန်ကူးခြင်းရဲ့ သရုပ်မှန် (သို့မဟုတ်) ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတည်ရှိရာကျွန်း
အလုပ်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာ
တိုကျို Disneyland နဲ့ တိုကျို DisneySea အတွက် ရက်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိတဲ့ လက်မှတ်တွေကိုမဲဖောက်ပေးတော့မည်
ဘက်တရီတောင်မရှိသေးတဲ့ခေတ်မှာ လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ Karakuri အရုပ်ကိုဖန်းတီးနိုင်ခဲ့သူ ပါရမီရှင် Hisashige Tanaka !!
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကုစားပေးနိုင်တဲ့ AI နည်းပညာစက်ရုပ် LOVOT !!!
သားသားမီးမီးတို့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစေခိုင်းနိုင်မယ့် ချစ်စရာစက်ရုပ်လေးတွေ